Maxaa loola jeedaa deynta Bagatell? Qeexidda ereyga maaliyadeed
Start daymaha -Leaks Deynta Bagatell
Der Deynta Bagatell waxaa sidoo kale loo yaqaanaa amaahda yaryar. Waa deyn aad u hooseeya, oo leh laba nooc oo amaah ah lacag deyn ah. On youtube waxaad ka heli kartaa hal sharaxaad ah: Privatkredit - Youtube video ah, taas oo dhinacyada muhiim ah ee deynta sida sharaxay.
Amaahda qadiimka ah ee loo yaqaan "microcredit"
Qeexidda creditka aan qarsoodi ahayn ayaa ku tilmaamaya sida deyn ahaan in ay hayso xadkeedu yahay mid aan sahlanayn oo aan ka badnayn mugga EUR 200, ama 500. Looma baahna in la sameeyo deyman aan faa'iido lahayn: qof macaamil ah oo loo aqoonsan yahay qof aan waxba galabsan bangigiisa, sida caadiga ah, wuxuu ka sarreeyaa xadka qiyaasta ee ku dhawaad ​​EUR 200. Haddii aad leedahay qaab shax ah, waxaad sidoo kale ku dari kartaa EUR 500, -. Deymanka noocan oo kale ah, ayaa sidaas darteed, si dhab ah loo dulqaatay muddada deynta ee hore loo siiyey. Haddii macaamilka uu leeyahay dakhliga caadiga ah ee aan caadiga ahayn, bangigu wuxuu u maleynayaa in deyn bixinta luntay lumi doono mushaharka soo socda.
Nooca noocaas ah ee deynta ah badanaaba waa iibsasho aad u gaaban. Waxa kale oo laga yaabaa inay tahay in qaansheegta laga jaro koontada hadda jirta ee ka baxsan qaabka qaabdhismeedka muddada gaaban. Si kastaba ha noqotee, waa macneheedu waa bacda, taas oo ah in la ilaawo ugu yaraan laba illaa saddex bilood.
Amaahda bagaaliga ah sida deyn gaar ah
Qeexidda kale micnaheedu waa deyn yar oo ah deyn gaar ah oo ah EUR 2.000, - ilaa EUR 5.000, -. Tani, dabcan, ma aha mid aad u sarreeya lacagta amaah, Si kastaba ha ahaatee, waa mid aad u sareeya si ay u awooddo inay si toos ah ugu hesho ATM-ga.
Dammaanadda noocan oo kale ah ayaa si dhakhso ah loola socodsiiyaa loona xakameyn karo: waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu fuliyo rabitaan wakhti gaaban ah. Tani waxay noqon kartaa safar fasax, baabuur cusub ama alaab cusub. Sababtoo ah codsiyada noocan oo kale ah ayaa badanaa la bixiyaa isla maalintaa, amaahda alaabta si degdeg ah ayaa loo bixiyaa. Marka la soo bandhigo heshiis shaqo iyo sadexdii ilaa lixdii musharrax ee mushaharka ugu dambeeyay, lacagtaas ayaa la barayaa isla maalintaas ama si toos ah loogu wareejin doonaa bangiga.
Sida caadiga ah, dadka iskood u shaqeysta ma yeelan karaan macaamil joogto ah oo joogto ah. Waa ku filan halkan in la awoodo in la diiwaangeliyo rasiidyada bixinta bilihii la soo dhaafay si ay uga faa'iideystaan ​​deynkaas.
Bangiyada sidoo kale waxay dadka siiyaan xiriir shaqo oo ku meel gaar ah leh deyn yar. Marka laga reebo muddada sanadka ee heshiiskan amaahda ah, waxaa la aaminsan yahay in macaamilka uu heli doono heshiis qandaraas ama uu helo boos cusub. Sicirka dulsaarka hooseeya iyo rajada wanaagsan ee suuqa shaqada ayaa ka dhigan in bangiyada ay noqdaan kuwo jilicsan oo deynta ka badan intii hore.
Deyn kaarka amaahda ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu bixiyo deyn lagu qaato. Heerka dulsaarka hooseeya wuxuu deyn gaar ah u leeyahay faa'iido. Xaaladda deymanka dabeecadda, dulsaarka dakhliga hoose ayaa ilaa hadda, ama ma'aha mid aad u yar, oo yimid. Halkan, lacag ayaa la badbaadin karaa.
Mabda 'ahaan, bangiga bixinaya waa inuu ka helaa macluumaadka Schufa. Haddii macaamilku uu galo diidmo, deynta lama siin karo. Si kastaba ha noqotee, bangiyada ayaa ka jawaabey tirada sii kordhaysa ee dadka soo galaya ee soo galaya: Bangiyada intooda badani waxay leeyihiin shirkado internetka oo ku saleysan dibadda ku salaysan dibadda. Maadaama sharciyada jarmalka aysan halkan ku dabaqi karin, waa ku filan inaad soo dirto heshiiska shaqada iyo caddaynta lacagta. Bangiga, oo diidi lahaa codsiga deyn bixiyaha, wuxuu ku heshiin doonaa codsigan internetka. Tani way ka qaalisan tahay macaamiisha, laakiin macnaha Shufa ayaa la is waydiinayaa. Waqtiga dadka cusub ee wadanka cusubi way dhaafsadeen.
Maqaalka xigtaxarunta damaanad